warkii.com » Trump oo weerar ku qaaday Joe biden
Trump oo weerar ku qaaday Joe biden
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa wareysi uu siiyay telefishanka “Fox News” maanta oo Axad ah diiday codbixin ifaafalo ka bixineyso dhibka sii kordhaya kaasoo uu kala kulmayo ninka ka soo horjeeda ee dimuqraadiga Joe Biden.
Trump oo ka jawaabayay su’aal kusaabsan codbixin hordhac ah oo muujinayso in Joe Biden uu ku hogaaminayo sideed dhibcood (49% iyo 41%), ayuu yiri, “Marka ugu horreysa, anigu wax walwal ah kama qabo codbixintaan waayo waa codbixin been abuur ah.”
Trump ayaa markaas kadib dhaleeceeyay ninka la tartamaya, isagoo carabka ku adkeeyay inuusan “awoodi karin inuu laba jumlo oo isku xigta xitaa yiraahdo”.
“Ma doonayo inaan dhaho hadalkaan balse isagu ma lahan karti uu ku noqdo madaxweyne … Madaxtinimada waxay u baahantahay maskax, ad adkaan iyo waxyaabo kale oo muhiim ah balse asiga xitaa ma awoodo inuu kasoo baxo gurigiisa” ayuu yidhi Donald Trump.
Hadalka Trump ayaa imaanayo kadib cod bixintii ugu dambeysay ee dadweynaha ka qaadeen shabakadaha IBC iyo Washington Post taasoo uu Trump ku helay 40% halka dhigiisa Joe Biden helay 55%.